``(၁၆)ကြိမ်မြောက် နန်နင်း-တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ´´ သို့ သွားရောက်ပြသကြမည့် ရတနာ ကုန်သည်များ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း..
``(၁၆)ကြိမ်မြောက် နန်နင်း-တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ´´ သို့ သွားရောက်ပြသကြမည့် ရတနာ ကုန်သည်များ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလဖိုင်ခွန်ဆာ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁) ဦးလှစိုးဦး၊ အသင်း အကြံပေး ဦးအောင်မြင့်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) ဦးအောင်ကျော်မြတ်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၊ အလုပ်အမှုဆောင်များသည် (၂၉.၇.၂၀၁၉)ရက် နေ့လည်(၁း၀၀)နာရီတွင် နေပြည်တော် စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန မူဝါဒနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၅၆ ကြိမ်မြောက်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲသို့ တက်ရောက်မည့်ရတနာကုန်သည်များ အာမခံစပေါ်ငွေနှင့် ဝင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန်ကိစ္စ
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း (၅)ရက်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်
၁။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ (၅၆)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကို မတ်လ(၁၁)ရက်မှ (၂၀)ရက်အထိ နေပြည်တော်၊ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရတနာပြပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်၊ ပုလဲအတွဲများကို တင်ပြရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် နိုင်ငံသားကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များက တင်ပြရောင်းချလိုသည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲစာရင်းလျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက်မှ (၂၅)ရက်အတွင်းကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ လာရောက်လျှောက်ထားရပါမည်။
၃။ ရတနာပြပွဲတွင် တင်ပြရောင်းချမည့် ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်အတွဲများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၄)ရက်မှ (၂၃)ရက်ထိလည်းကောင်း၊ ပုလဲအတွဲများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၄)ရက်မှ (၆)ရက်ထိလည်းကောင်းစစ်ဆေးလက်ခံခြင်း၊ အခြေခံရောင်းဈေး ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြပွဲကျင်းပမည့်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့မင်းကျင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ရတနာပြပွဲသို့ ခွင့်ပြုမိန့်ရယူ၍ ကျောက်မျက်ရတနာများ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံသားကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လိုင်စင်ရယူ၍ ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံသားကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင် နိုင်ငံသားများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရတနာပြပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လိုင်စင်ရယူထားသူများကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲသို့ တက်ရောက်ဝယ်ယူလိုသော နိုင်ငံသားရတနာကုန်သည်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံစပေါ်ငွေနှင့် ဝင်ကြေးငွေများ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၆)ရက်မှ (၂၂)ရက်ထိ မန္တလေးမြို့နှင့် မိုးကုတ်မြို့တို့တွင် စီမံရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များရှိ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်တွင်းရတနာကုန်သည်များကို ပြပွဲတက်ရောက်ဝယ်ယူခွင့် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၅)ရက်မှ စတင်၍ နေပြည်တော်၊ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမရှိ ရတနာကုန်သည် မှတ်ပုံတင်အဆောက်အအုံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရတနာကုန်သည်များကို ပြပွဲတက်ရောက် ဝယ်ယူခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၆)ရက်မှစတင်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရတနာကုန်သည်များ ပြပွဲဝင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ပြပွဲဝင်ခွင့်ပုံစံများကို www.mining.gov.mm နှင့် www. mge.gov.mm တို့မှတစ်ဆင့် Download ရယူ၍ ကြိုတင်ဖြည့်စွက် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ (Online မှ တစ်ဆင့်လျှောက်ထား လိုပါက မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း Website www.mge. gov.mm ,Online Pre-Registration System တွင် ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်၍ ပြပွဲတက်ရောက်ခွင့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၉။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ (၅၆)ကြိမ်မြောက်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကမြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)၊ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)၊ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးဌာန(လုံးခင်း)၊ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးဌာန (မန္တလေး၊ မိုးကုတ်၊မိုင်းရှူး)နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ခန္တီးမြို့ မိုးညှင်းမြို့များတွင် အခြေပြုသည့် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးဌာန (စခန်းရုံး)များတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
"ကျပ်ငွေဖြင့်ကျင်းပသည့် (၇) ကြိမ်မြောက်ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခြင်း"
ကျပ်ငွေဖြင့် ပြသ ရောင်းချသည့် (၇)ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၃,၀၀၀ ကျော် မှ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့်ရောင်းချခဲ့ရကြောင်း စီမံရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်း ဇော်ဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော်ရှိ မဏိရတနာ ကျောက်စိမ်းခန်းမတွင် ကျပ်ငွေ ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည့် ကျောက်စိမ်း အသား ကျောက်ရောင်းချပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၃,၃၃၉ တွဲနှင့် ကျောက်မျက်အ ရိုင်း ၉၆ တွဲ ပြသရောင်းချခဲ့ သည်။
ပြပွဲ၌ ကျောက်မျက်တွဲများ ကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက် အထိလည်းကောင်း၊ ကျောက် စိမ်းတွဲများကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် မှ ၁၇ ရက်အထိလည်းကောင်း သတ်မှတ်ရက်များအတွင်း ဝယ် ယူနိုင်ကြောင်း ပြပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထား သည်။
ယင်း ကျောက်တွဲများအ နက် ရောင်းချခဲ့ရသော ကျောက် စိမ်း ၃,၁၈၅ တွဲမှ တန်ဖိုး ကျပ် ၄၈,၂၉၈ ဒသမ ၄၉ သန်းနှင့် ကျောက်မျက်ရောင်းချမှု ၅၀ တွဲမှတန်ဖိုး ကျပ် ၇၉၄ ဒသမ ၉ သန်း ကျော်ရရှိခဲ့သည်ဟု ပြပွဲကျင်းပ ရေးကော်မတီ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုပြပွဲသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ မတ်လအတွင်း ပြုလုပ် ခဲ့သော ပြပွဲနှင့် ယှဉ်ပါက တင်ပြ သော အတွဲအရေအတွက်နှင့် ရောင်းချရသည့်တန်ဖိုးမှာ လျော့ နည်းခဲ့သည်ဟု ဦးသန်းဇော်ဦးက ဆိုသည်။
‘‘ကိန်းဂဏန်းအရ ပြောရင် လျော့သွားမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲ မှာ ရောင်းရတဲ့အနေအထားက တော့ ဘာပဲပြောပြော မျှော်မှန်း ထားတာထက်ကို ပိုပြီးတော့မှ ရောင်းချရပါတယ်’’ဟု ဦးသန်း ဇော်ဦးက ပြောသည်။
တင်ပြလာသော ကျောက် တွဲနှင့် တွက်ချက်ထားသော ကိန်း ဂဏန်းများအရ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်ဟု ကျောက် စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီ အတွင်း ရေးမှူး ဦးကျော်ဦးလွင် (ဒုတိယ အထွေထွေမန်နေဂျာ)က ဖြည့် စွက်ပြောသည်။
၂၀၁၇ မတ်လက ကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချခဲ့သော ပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက် ၄,၆၄၉ တွဲ ပြသခဲ့ရာမှ ၄,၂၆၇ တွဲရောင်းချရပြီး တန်ဖိုးကျပ်သိန်း ၆၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း ကော်မတီထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ ယခု ကျင်းပသည့် ပြပွဲသို့ ကုမ္ပဏီ၊ သမ အရောင်း ဆိုင် ၄၀၀ ခန့်ပါဝင်ပြီး ရတနာ ကုန်သည် စုစုပေါင်း ၁,၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ကော်မ တီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။